Yan Aung: စာမဟုတ်သောစာနှင့် ဗိုက်ဆီဗာဆာ
ကျွန်တော်တို့တွေ မတွေ့ကြတာလည်း အတော်ကြာပြီပဲဗျာ.နော်. ဟုတ်တယ်ဗျာ. ကျွန်တော်လည်း ဘ၀အမောတွေနဲ့ လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေတာနဲ့ ၀ါသနာပါတဲ့ စာရေးတဲ့ဖက်ကို မလှည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်. အခုလည်း အမောပြေလို့ လာရေးတာမဟုတ်ပါဘူး. မောလျက်နဲ့ပဲ ရေးနေတာပါ.း)
ဘလော့ဂ်မရေးတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုရင် အခု Blogger ထဲကို ၀င်ကြည့်တော့မှ ပုံစံတွေ၊ အထာတွေ တော်တော်လေး ပြောင်းနေတာကို သတိထားမိလိုက်ရတယ်ဗျ. အင်း... တော်တော် နောက်ကောက်ကျနေပါလားလို့တွေးမိတယ်.
နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကလည်း ကျွန်တော်စာရေးရမှာ နည်းနည်း ရွံ့နေသလိုပဲ. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသက်လေးက အရင်ကထက်စာရင် မသိမသာ၊ မဆိုစလောက်၊ နည်းနည်းလေး ပိုကြီးလာတော့ အရင်လိုခံစားချက်၊ အရင်လို လက်ရာမျိုးနဲ့ ပြန်ရေးဖို့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေတယ်.
ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.. (အဲဒါတော့ မပျောက်သေးဘူးဗျ.) ဟတ်ဟတ်.. (ဩော်. ပြောမှ ပိုဆိုးနေပြန်ပြီ.)း)
ကျွန်တော့်ဆီဘောက်စ်ကြည့်ရတာလည်း စိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲဗျာ. Porn Site တွေက ၀င်ဖွလိုက်၊ ခရီးသွားဟန်လွှဲဝင်သမချင်သူတွေက ဆိုဆဲလိုက်နဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရရင် အမြင်မတင့်တယ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ. ဒဲ့ပြောရရင်တော့ ကျက်သရေတုံးနေတယ်. ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီး ဆီဘောက်စ်ကို မတပ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်. ကျွန်တော်လည်း အချိန်တိုင်း မသင့်တော်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို မဖျက်နိုင်၊ စာပြန်ဖို့လည်း သိပ်စိတ်မ၀င်စားဆိုတော့ ဘာမှ ဆုံးရှုံးတဲ့ ရလာဒ်ဖြစ်လာမယ်လို့ မထင်မိပါဘူး. ကော်မန့်တွေကိုလည်း ကျွန်တော် အချိန်ရသလို Publish လုပ်ပေးပါမယ်.
ဒီစာက စာမဟုတ်ပါဘူး. စာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး. ရှုပ်ကုန်ပြီ ထင်တယ်. ဟတ်ဟတ်.
စာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာက ဘလော့ဂ်ပို့စ်အနေနဲ့ တကူးတကရေးတဲ့ စာမဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်မှာ ဆီဘောက်စ်တင်လာတာ စာစရေးဖြစ်ကတည်းကပါ. အခုဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် စာဖတ်သူတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေကို တလေးတစား အသိပေးပြီး တင်ပေးတဲ့ စာတိုလေးပါ. အဲဒါကြောင့် စာမဟုတ်ပါဘူး.
စာမဟုတ်ပြန်ဘူးလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး. ဘလော့ဂ်မှာ တင်မှတော့ တိုသည်ဖြစ်စေ၊ ရှည်သည်ဖြစ်စေ ပို့စ်ဟာပို့စ်ပါပဲ. ဒါကြောင့် စာလည်း ဟုတ်ပါတယ်.
ကဲ. အားရအောင် ရှုပ်ပြီးပါပြီ.
အားလုံးပဲ ကောင်းသောနေ့သစ်လေးများ၊ ညချမ်းလေးများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ.
ဗိုက်ဆီဗာဆာ = Vice Versa ... အပြန်အလှန်လို့ သဘောရပါတယ်.း)